အမေရိကန်ထိပ်တန်းအရာရှိဟောင်း Bill Richardson မြန်မာစစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ခဲ့တာကနေ ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်မူအပေါ် သုံးသပ်သူတွေ ကွဲပြားနေကြပါတယ်။ မြန်မာ့အရေးကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်ထဲက ဝင်ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကြိုးပမ်းလာခဲ့တဲ့ အမေရိကန် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့ ကုလဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးဟောင်းရဲ့ အခုခရီးစဉ်ကနေ၊ နိုင်ငံရေး နဲ့ လူသားချင်းစာနာမူ ဆိုင်ရာတွေအရ အကျိုးရှိနိုင်မူအပေါ် အမြင်မတူတာတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒီအကြောင်း NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ အမူဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦးတို့ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အကြံပေးအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့ဘူးသူ နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမေရိကန်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး Bill Richardson ခရီးအပေါ် ဒေါက်တာဆာဆာ က အခုလိုစဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဆာဆာ ။. ။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ NUG တုိ့ CRPHတို့နဲ့လည်း သူမသွားခင်မှာ ဆွေးနွေးသင့်တယ်။ ဒါတွေဆွေးနွေးခြင်းမရှိပဲနဲ့ ဒီအတိုင်းသွားပြီးတော့ အဲဒီလိုဖြစ်တာဟာ ဘာမှမျှော်လင့်ဖို့မရှိဘူးပေါ့။ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပေမယ့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါတွေကို စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာ UN တို့ INGOတို့ CSO တို့ကနေ သွားမယ်ဆိုတာပြောပြီးသား။ နိုင်ငံတကာလည်း လက်ခံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီခရီးစဉ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးတော့ မျှော်လင့်ဖို့မရှိပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ စဖွဲ့ခဲ့တဲ့ သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာ လေ့လာရေးအဖွဲ့က ဒေါက်တာနိုင်ဆွေဦး ကတော့ အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒေါက်တာ နိုင်ဆွေဦး ။. ။ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတော့ ကိုဗစ်နိုင်တီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရတယ်။ တကယ်လို့များ ကိုဗစ်နိုင်တင်း နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အကူညီတွေရနိုင်ရင် အကျိုးရှိနိုင်တယ်။ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကတော့ တခါတလေကြရင် လူကြားကောင်းအောင်တပ်တာလို့မြင်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်ကို အကြောင်းပြပြီးတော့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တာ ရှေ့သမိုင်းမှာ ကျနော်တို့ မကြာခဏကြုံတွေခဲ့ရဘူးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ရှိမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့ဖမ်းဆီးခံရတာရှိတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့နိုင်ငံသား ပြန်လွှတ်ရေးအတွက်ပဲလာသလား ဆိုတာ စဉ်းစားဖို့သင့်တယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒေါက်တာဆာဆာကတော့ ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအတွက်ဆိုရင်တော့ တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒေသတွေကို မရောက်နိုင်ဘူးလို့ ထပ်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဆာဆာ ။. ။ ဒီဟာကိုမှလာတဲ့ လူသာချင်းစာနာမှုကတော့ ချင်းပြည်နယ် တို့ ကချင်ပြည်နယ်တို့ အခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေရောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ အခုအခြေအနေမှာ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်တို့၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတို့ကနေပြီးတော့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူညီတွေကို မလုပ်တော့ပဲနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွေကတဆင့် နယ်စပ်ကို ဖြတ်ပြီးတော့ ကူညီထောက်ပန့်မှုတွေကို လုပ်ပေးပါဆိုပြီး တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလက်တွေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် စစ်ကောင်စီဖက်ကနေပြီးတော့ ဖြတ်လေးဖြတ်ကို တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ ပြုလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်နိုင်ငံရေးအရဆိုရင် အမေရိကန် နဲ့တရုတ်တို့က ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့ ဒေါက်တာ ဆာဆာ ကအကြံပြုပါတယ်။
ဒေါက်တာ ဆာဆာ ။. ။ အမေရိကန် နဲ့တရုတ်နဲ့ က အာဆီယံကိုပဲ စောင့်ကြည့်နေတာ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကို နိုင်ငံအတော်များများမှာ ရှိလာတာကိုတော့ ကျနော်သုံးသပ်မိပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဒါကို နည်းဗျူဟာ မဟာဗျူဟာကျကျနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ တရုပ်နဲ့ အမေရိကန်လည်း ပူးပေါင်းနိုင်တဲ့နေရာမှာ ပူးပေါင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဒီထက်မက ပူးပေါင်းဖုိ့လိုပါတယ်။ တရုတ်ကတောင် စစ်ကောင်စီကို တားမြစ်လို့ရတယ်။ အမြင့်ဆုံးလုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။ ။ ရုရှာမှာ ဘွဲ့လွန်ပညာသင်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ နိုင်ဆွေဦး ကတော့ ဖိအားပေးလည်း မြန်မာစစ်ကောင်စီကတော့ ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ နိုင်ဆွေဦး ။. ။ ဖိအားပေးမှုတွေရှိပေမယ့်လည်း လက်ရှိစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ သူမှာ ဦးတည်ချက် ရည်မှန်ချက်တွေရှိပြီးသား ။ Road Map ရှိပြီးသား။ ဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်လို့တော့ ကျနော်တို့မြင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်အဆက်ဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အစိုးရအများစုကတော့ ပြည်ပဖိအားပေးမှုတွေကို ဂရုစိုက်လေ့မရှိဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ ဟားဘတ်တက္ကသိုလ်မှာ ပါမောက္ခလုပ်ခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားအရေးမှာ ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားလုပ်ခဲ့သူ ဝါရင့်သံတမန်ကြီးအနေနဲ့ တရုတ်ဖိအားပါရအောင်ဆွေးနွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်သူတွေက ဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
Bill Richardson ရဲ့ခရီးစဉျ ဘယျလိုအကြိုးသကျရောကျမှု ရှိနိုငျမလဲ
အမရေိကနျထိပျတနျးအရာရှိဟောငျး Bill Richardson မွနျမာစဈကောငျစီ ခေါငျးဆောငျ ဗိုလျခြုပျမူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျနဲ့တှခေဲ့တာကနေ ဘယျလိုသကျရောကျနိုငျမူအပျေါ သုံးသပျသူတှေ ကှဲပွားနကွေပါတယျ။ မွနျမာ့အရေးကို ၁၉၉၄ ခုနှဈထဲက ဝငျဖွရှေငျးပေးဖို့ ကွိုးပမျးလာခဲ့တဲ့ အမရေိကနျ စှမျးအငျဝနျကွီးဟောငျးနဲ့ ကုလဆိုငျရာသံအမတျကွီးဟောငျးရဲ့ အခုခရီးစဉျကနေ၊ နိုငျငံရေး နဲ့ လူသားခငျြးစာနာမူ ဆိုငျရာတှအေရ အကြိုးရှိနိုငျမူအပျေါ အမွငျမတူတာတှေ ရှိနပေါတယျ။
ဒီအကွောငျး NUG အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာဆာဆာနဲ့ သနေင်ျဂမဟာဗြူဟာလလေ့ာရေးအဖှဲ့ အမူဆောငျဒါရိုကျတာ ဒေါကျတာနိုငျဆှဦေးတို့ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ရခိုငျပွညျနယျအရေး အကွံပေးအဖှဲ့မှာ ပါဝငျခဲ့ဘူးသူ နယူးမက်ကဆီကိုပွညျနယျ အုပျခြုပျရေးမှူး အမရေိကနျဝါရငျ့နိုငျငံရေးသမားကွီး Bill Richardson ခရီးအပျေါ ဒေါကျတာဆာဆာ က အခုလိုစဝဖေနျလိုကျပါတယျ။
ဒေါကျတာ ဆာဆာ ။. ။ ကနြျောတို့ မွနျမာနိုငျငံ ကိုယျစားပွုနတေဲ့ NUG တုိ့ CRPHတို့နဲ့လညျး သူမသှားခငျမှာ ဆှေးနှေးသငျ့တယျ။ ဒါတှဆှေေးနှေးခွငျးမရှိပဲနဲ့ ဒီအတိုငျးသှားပွီးတော့ အဲဒီလိုဖွဈတာဟာ ဘာမှမြှျောလငျ့ဖို့မရှိဘူးပေါ့။ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားရေးအတှကျဖွဈတယျလို့ ပွောပမေယျ့ ကိုဗဈကာကှယျဆေးပဲဖွဈဖွဈ အဲဒါတှကေို စဈကောငျစီလကျထကျမှာ UN တို့ INGOတို့ CSO တို့ကနေ သှားမယျဆိုတာပွောပွီးသား။ နိုငျငံတကာလညျး လကျခံပွီးသားဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီခရီးစဉျနဲ့ပါတျသကျပွီးတော့ မြှျောလငျ့ဖို့မရှိပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါပမေယျ့ မွနျမာစဈတပျအရာရှိဟောငျးတှနေဲ့ စဖှဲ့ခဲ့တဲ့ သနေင်ျဂမဟာဗြူဟာ လလေ့ာရေးအဖှဲ့က ဒေါကျတာနိုငျဆှဦေး ကတော့ အကြိုးရှိနိုငျတယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဒေါကျတာ နိုငျဆှဦေး ။. ။ တရားဝငျသတငျးထုတျပွနျခကျြတှအေရတော့ ကိုဗဈနိုငျတီးနဲ့ပတျသကျပွီးဆှေးနှေးကွတယျလို့သိရတယျ။ တကယျလို့မြား ကိုဗဈနိုငျတငျး နဲ့ပတျသကျပွီးတော့ အကူညီတှရေနိုငျရငျ အကြိုးရှိနိုငျတယျ။ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျကတော့ တခါတလကွေရငျ လူကွားကောငျးအောငျတပျတာလို့မွငျပါတယျ။ ဒီခေါငျးစဉျကို အကွောငျးပွပွီးတော့ နိုငျငံတှရေဲ့ အကြိုးစီးပှားကို ဝငျရောကျစှကျဖကျတာ ရှသေ့မိုငျးမှာ ကနြျောတို့ မကွာခဏကွုံတှခေဲ့ရဘူးတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ လကျရှိမှာ အမရေိကနျနိုငျငံသားတခြို့ဖမျးဆီးခံရတာရှိတယျ။ ဆိုတော့ သူတို့နိုငျငံသား ပွနျလှတျရေးအတှကျပဲလာသလား ဆိုတာ စဉျးစားဖို့သငျ့တယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒေါကျတာဆာဆာကတော့ ဒီလူသားခငျြးစာနာမှုအတှကျဆိုရငျတော့ တကယျဒုက်ခရောကျနတေဲ့ဒသေတှကေို မရောကျနိုငျဘူးလို့ ထပျဝဖေနျလိုကျပါတယျ။
ဒေါကျတာ ဆာဆာ ။. ။ ဒီဟာကိုမှလာတဲ့ လူသာခငျြးစာနာမှုကတော့ ခငျြးပွညျနယျ တို့ ကခငျြပွညျနယျတို့ အခုတိုကျပှဲတှဖွေဈပှားနတေဲ့နရောတှရေောကျဖို့ဆိုတာကတော့ အခုအခွအေနမှော မဖွဈနိုငျတဲ့အခွအေနဖွေဈပါတယျ။ မင်ျဂလာဒုံလဆေိပျတို့၊ ရနျကုနျဆိပျကမျးတို့ကနပွေီးတော့ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားတဲ့အကူညီတှကေို မလုပျတော့ပဲနဲ့ ထိုငျးနိုငျငံ၊ အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ တရုတျနိုငျငံတှကေတဆငျ့ နယျစပျကို ဖွတျပွီးတော့ ကူညီထောကျပနျ့မှုတှကေို လုပျပေးပါဆိုပွီး တောငျးဆိုနတောဖွဈပါတယျ။ ဒါလကျတှလေ့ညျးဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုရငျ စဈကောငျစီဖကျကနပွေီးတော့ ဖွတျလေးဖွတျကို တိုကျပှဲဖွဈတဲ့နရောတိုငျးမှာ ပွုလုပျနတောတှရေ့တယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျနိုငျငံရေးအရဆိုရငျ အမရေိကနျ နဲ့တရုတျတို့က ဖိအားပေးသငျ့တယျလို့ ဒေါကျတာ ဆာဆာ ကအကွံပွုပါတယျ။
ဒေါကျတာ ဆာဆာ ။. ။ အမရေိကနျ နဲ့တရုတျနဲ့ က အာဆီယံကိုပဲ စောငျ့ကွညျ့နတော အလုပျမဖွဈတော့ဘူးဆိုတဲ့အနအေထားကို နိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ ရှိလာတာကိုတော့ ကနြျောသုံးသပျမိပါတယျ။ တခြိနျတညျးမှာပဲ ဒါကို နညျးဗြူဟာ မဟာဗြူဟာကကြနြဲ့ ကိုငျတှယျဖို့လိုပါတယျ။ တရုပျနဲ့ အမရေိကနျလညျး ပူးပေါငျးနိုငျတဲ့နရောမှာ ပူးပေါငျးဖို့လိုပါတယျ။ ဒီထကျမက ပူးပေါငျးဖုိ့လိုပါတယျ။ တရုတျကတောငျ စဈကောငျစီကို တားမွဈလို့ရတယျ။ အမွငျ့ဆုံးလုပျဖို့တော့လိုပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။ ။ ရုရှာမှာ ဘှဲ့လှနျပညာသငျခဲ့တဲ့ ဒေါကျတာ နိုငျဆှဦေး ကတော့ ဖိအားပေးလညျး မွနျမာစဈကောငျစီကတော့ ခံမှာမဟုတျဘူးလို့ ပွနျထောကျပွခဲ့ပါတယျ။
ဒေါကျတာ နိုငျဆှဦေး ။. ။ ဖိအားပေးမှုတှရှေိပမေယျ့လညျး လကျရှိစဈကောငျစီအနနေဲ့ကတော့ သူမှာ ဦးတညျခကျြ ရညျမှနျခကျြတှရှေိပွီးသား ။ Road Map ရှိပွီးသား။ ဒီအတိုငျးဆကျသှားမယျလို့တော့ ကနြျောတို့မွငျပါတယျ။ ကနြျောတို့မွနျမာနိုငျငံ ခတျေအဆကျဆကျ အုပျခြုပျခဲ့တဲ့ အစိုးရအမြားစုကတော့ ပွညျပဖိအားပေးမှုတှကေို ဂရုစိုကျလမေ့ရှိဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ ဟားဘတျတက်ကသိုလျမှာ ပါမောက်ခလုပျခဲ့ပွီး မွောကျကိုရီးယားအရေးမှာ ယုံကွညျခကျြအပွညျ့နဲ့ ပွတျပွတျသားလုပျခဲ့သူ ဝါရငျ့သံတမနျကွီးအနနေဲ့ တရုတျဖိအားပါရအောငျဆှေးနှေးနိုငျလိမျ့မယျလို့ သုံးသပျသူတှကေ ဆိုနကွေပါတယျခငျဗြာ။